တရုတ် Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ကံဇာတာ
Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated သည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအရည်ဖြစ်ပြီးအေးမြ။ ခြောက်သွေ့။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်သိုလှောင်ထားသင့်ပါသည်။
Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated ကိုအေးမြခြောက်သွေ့သောလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်ထားသင့်သည်။ အလင်းဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုရှောင်ရှားရန်, အခန်းအပူချိန်မှာတည်ငြိမ်။
Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန်မြင့်မားသော triaryl ဖော့စဖိတ် isoprenylated စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူပေးအပ်ခြင်းသည်သင့်အားအမြောက်အများဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေပြီး 68937-41-7, ippp 50, reofos 50 သည်၎င်း၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သည်။
1.Synonyms: IPPP, Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated, Kronitex 100, Reofos 50, Triaryl ဖော့စ ဖိတ်2. မော်လီကျူးအလေးချိန်: 3903.CAS NO .: 68937-41-74. ဖော်မြူလာ: C18H15 R3O4P5.Specifications: အသွင်အပြင်: အရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်အလင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှု။ (20/20 ℃): 1.166-1.185Acid တန်ဖိုး (mgKOH / g): 0.2 maxColor အညွှန်းကိန်း (APHA Pt-Co): 80 maxViscosity @ 25 ℃, cps: 50-64Phosphorus အကြောင်းအရာ: 8.1% min6.Applications: အကြံပြုသည် PVC၊ မီးလျှံဟက်၊ ရုပ်ရှင်၊ ကေဘယ်၊ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် polyurethanes၊ ပြုပြင်ထားသော PPO၊ polycarbonate နှင့် polycarbonate ရောစပ်ခြင်းများကဲ့သို့သောအင်ဂျင်နီယာဗဓေလသစ်များအတွက်မီးလျှံတားဆီးသည့်လုပ်ဆောင်မှုအကူအညီအဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဆီခုခံမှု၊ လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုနှင့်မှိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအပေါ်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ၇. အထုပ် - ၂၃၀ ကီလိုဂရမ် / သံဗည်ကွန်ယက် (၁၈.၄ မက်စ် / ဖ်)， 1150KG / IB ကွန်တိန်နာ၊ ၂၀-၂၃ မက်စ်၊ အိုင်ဆိုတန့်။ ။ , Class 9
triaryl ဖော့စဖိတ် iospropylated စျေးနှုန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်အတူပေးခြင်း, Zhangjiagang Fortune ဓာတုကုမ္ပဏီ, Ltd သည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ triaryl ဖော့စဖိတ်တရုတ်နိုင်ငံရှိ iospropylated ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း, သင်တို့ကိုအမြောက်အများ triaryl ဖော့စဖိတ် iospropylated ၎င်း၏စက်ရုံမှဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။